Duet Game, lalao lavorary hampihetsi-po ny hakinganao sy ny fahitanao | Vaovao IPhone
Raha miresaka lalao ao amin'ny App Store isika mandritra ny taona 2014, ilaina ny miresaka momba ny Monumet Valley, lalao iray nahazo loka be dia be niaraka tamin'ny mekanika tena tsotra nefa miaraka amin'izay koa. Aza matoky na inona na inona, ny fetra dia apetrakareo sy ny fomba fijerinay ny lalao, Azo antoka. Androany aho mitondra anao lalao antsoina hoe Lalao Duet izay hisedra antsika roa amin'ny fahakinganana sy ny fahitana ary koa ny hafainganan'ny hafainganan'ny atidohantsika izay ilaina. Handinika an'ity lalao minimalist ity izahay iray amin'ireo feon-kira tsara tarehy indrindra ho an'ny lalao Hitako tao amin'ny App Store. Aorian'ny fitsambikinana.
1 Duet Game, lalao mamiratra noho ny minimalism-ny
2 Ny tanjon'ny lalao, mora nefa sarotra amin'ny fotoana iray
3 Soundtrack mifanaraka amin'ny tandindon'ny sambo
4 Vidiny mora vidy amin'ny paosinay
5 Ny tombam-bidinay
Duet Game, lalao mamiratra noho ny minimalism-ny
Ny endriny tsy misy kilema. Ny ambaratonga tsirairay dia manana ambadika volondavenona sy mainty izay mihetsika, ary hidina ny bara fotsy Mitovy loko hatrany izy ireo: fotsy (raha tsy hoe tsy mahavita be isika amin'ny faran'ny ambaratonga dia holazaiko aminao avy eo). Araka ny nolazaiko, Duet Game dia tena minimalista, noho izany tsy ampy singa ara-pahitana maro. Ny mpihetsiketsika dia baolina roa izay misy symbiosis (tsy afaka mihetsika avy amin'ny orbitany izy ireo, iray mena ary iray manga. Mikasika ny famolavolana, Toa ahy fa fampiharana tena milamina izy io, ary tena mendrika izany. Lalao vitsivitsy no hitako tamin'ny famolavolana mitandrina sy minimalista.
Ny tanjon'ny lalao, mora nefa sarotra amin'ny fotoana iray
Miankina amin'ny fiarovana ny sambo roa ny fahavelomanao. Izy ireo dia artifact amin'ny synchrony, dihy ary hira iray misy eo amin'ny orinasa roa mifamatotra sy miray amin'ny simbiose. Mahatsapa fampihorohoroana izay hitazonana anao hisalasala, amin'izay hanjary hangina sy tsy hiraharaha ny tontolo manodidina anao, toa ny lalao tokana mipetraka eo an-tananao ihany no zava-dehibe. Io no Duet.
Ity ny famaritana ny tanjona azontsika jerena ao amin'ny App Store, Mahagaga, sa tsy izany? Ny fomba ampitahàn'izy ireo ny faharetan'ny «baolina roa» (izay sambo) amin'ny singa samihafa dia mahatonga ahy farafaharatsiny, atsobohy amin'ny tantara lazain'izy ireo amiko aho. Ny tanjona, araka ny efa novakianao, dia ny hahatonga ny sambontsika ho velona (manga sy mena). Inona no azontsika hiarovana azy ireo? Amin'ny vato fotsy sasany midina, raha misy sambo iray mikasika ny sakana manga, dia "voaisy" ary Game Over, manomboka indray ny haavony. Somary manahirana ihany ny fampisehoana ny lasibatra Ambonin'ireto tsipika ireto dia manana ny tranofiara navoakan'ny developer ianao. Ankoatra ny tantara, Duet Game dia manana fanamby sy epilog miaraka amin'ny ambaratonga fanampiny 40.
Soundtrack mifanaraka amin'ny tandindon'ny sambo
Feon-kira mahatalanjona Tim Shiel no hiaraka aminao eny an-dalana.
Duet Game koa dia manana feon-kira tany am-boalohany noforonin'i Tim shiel miaraka amina singa 8 mahery, izay hoy ny mpamorona dia "manolotra hatsarana mampihetsi-po izay hamandrika anao amin'ny traikefa mahavariana isaky ny dingana". Mampanantena anao aho fa tsara ny feon-kira, ary indraindray dia manampy antsika hihoatra ny ambaratonga izany raha mihaino tsara ny gadona isika. Ka raha manapa-kevitra ny hisintona ny Duet Game ianao, Manoro hevitra anao aho hampiasa aroloha.
Vidiny mora vidy amin'ny paosinay
Ho fanampin'ireo zavatra rehetra nolazaiko taminao momba ny Duet Game dia hadinoko ny nilaza izany taminao nandritra ny ambaratonga rehetra Asehon'izy ireo amintsika ny "fisaintsainana" ny tahotra, ny fahamarinana ary ny fihetseham-po tsy misy fotony hafa Amin'ny alàlan'ny feo anglisy (tsy nadika tamin'ny teny espaniola izy ireo, fa ny soratra kosa). Tamin'ny farany, Ny vidin'ny Duet Game dia 0,89 euro fotsiny ao amin'ny App Store, Sarobidy ho ahy izany ary izany no mahatonga ny fanombanana omeko ny lalao mety indrindra. Miomana amin'izany ve ianao?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » Duet Game, ny lalao tonga lafatra hampihetsi-po ny hakinganao sy ny fahatsapanao
Workflow, ataovy automatique ny hetsika amin'ny iOS amin'ity app ity